झुम्लावाङ्गमा 'नजर' :: Press Chautari ::
हृदयमा सिंगो देश र समाज नै बोकेपछि यो पञ्चतत्वले बनेको शरिर ब्रम्हण्डको कुनै बिन्दुमा पुगे पनि अलग र दुर हुँदैन । दृश्यबाट पर रहेपनि मनको भित्री तहमा टाँसिएको श्यामस्वेत तास फोटो जस्तो सम्झना कुनै आधुनिक शहरको रंङ रोगनले बिर्साउनै सक्दैन । कहरको ढाँकरमा अलिकति रहर बोकेर शहर उक्लेकी गीतकार पदमा लिंखा मगर यो उज्यालो आकास गम्लङ्गै ओढे पनि उनले विगतमा बाँचेका उद्गमथलो छाम्छाम् छुम्छुम गर्छिन । र अध्यारैमा भेटछिन् गाउँका सुदूर उज्यालाहरु अनि देख्छिन् बस्तीमै भविष्यका उर्जाशील जीवनहरु । यसैले त उनी प्रत्येक जसो रातहरुमा गाउँबस्तीको उज्यालोकै निम्ति सपना बुन्छिन् । उनीसँगै कहिले उनका सपना अघि त कहिले सपना पछि साहस र प्रेरणा बनेर निरन्तर हिडिँरहेकाछन् पति दुर्लभ मगर । पदमा भन्छिन्-“वहाँ नै हो मेरो सिर्जनाको प्रेरणादायी स्रोत ।” अब यसो भनुँ यी दुई प्राणी पहाड र नदी भएर सिर्जनशील बाँझोपटलाई सिञ्चित गराईरहेकाछन् ।
१८ हिउँद बिति सक्यो पदमा र दुर्लभले एउटै आकास ओढेको । १८ वटै बर्खा बित्यो उस्तै घाम पानी खेपेको । सुदूरपुर्वी जिल्ला संखुवासभाको माम्लिङ्गमा किराती सभ्यतामाँझ जन्मेकी पदमा मध्येपश्चिमी जिल्ला रुकुम झुम्लावाङ्गका दुर्लभ सँगको प्रेम र सम्बन्ध दुई आत्मालाई मात्र होइन छुट्टाछुट्टै समाजलाई जोड्ने बलियो आधार पनि बनेको छ । पृथक परिवेश बाँचेर यहाँ सम्म आईपुगेका यी जोडीले अलग अलग दृष्टि देखे पनि एउटै दुःख रोएकाछन् । फरक फरक हाँसो हाँसे पनि दुइटैलाई खुसी तुल्याउने सुख एउटै बनेको छ ।
एउटा सामान्य जीवन दुवैको भरथेकमा चलेकै छ । प्रवासको बसाई सरल छैन जीवन । यद्यपी साङ्गो पाङ्गो जीवनबीच हृदयको केन्द्रमा देश र समाज अटाएर पदमा सिर्जनामा तल्लिन हुन्छिन् । उनी त्यहि देश र समाजलाई विम्व बनाएर कतै गीत उमार्छिन त कहि गजल उभ्याउँछिन् । यसैगरी पदमा माम्लिङ्ग र झुम्लावाङ जस्तै ग्रामीण जन जीवन र परिवेशहरुमा गीतका अनुप्रास मिसाउँछिन् । देश र परिस्थिती सुहाउँदो गजलका शेर र मत्लाहरुमा रदीफ/काफिया मिलाउँछिन् । जसरी उनले गीत र गजलका हरफहरुमा गहिरो भावनाले प्राण भरेकीछन् त्यसै गरी उनका सिर्जनाले कमाएका दुई चार पैशाले झुम्लावाङ् र माम्लिङ्गमा जीवन थपेकीछन् । यस्तै बेला दुर्लभ गर्विलो छाती ढक्क फुल्याउँदै पदमाको सिर्जनामा हृदयले थप्पडी मार्छन ।
"पदमाको एकल रचनामा प्रकाशित नजर गीतिसंग्रहको बिक्रीबाट संकलित ७ लाख भन्दा बढि रकम हालसालै रुकुमको झुम्लावाङ्गमा निर्माणाधिन सामुदायीक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापनार्थ हस्तान्तरण गरियो । "
माथि उदघृत समाचारको फेरो समाएर यत्तिबेला लोक भन्दैछ:
"वाह ! कस्तो विशाल हृदय ?"
हो त, आफ्नो सिर्जना बाँढेर जोडेको दुई चार पैशाले झुम्लावाङ्गमा बन्दै गरेको स्वास्थ्य केन्द्रलाई यत्तिबेला ठुलो राहत मिलेको छ । यत्ति गर्न पाएकोमा यी दम्पत्तीले अचेल आनन्दको लामो श्वास फेरेकाछन् । न कुनै कार्यक्रम न भेटघाट । कुनै औपचारिकता बिना यी दम्पत्तीले यत्रो रकम झुम्लावाङ्गको उज्यालोको निम्ति सुटुक्क पठाईदिए ।
यस्तो लाग्छ, प्रत्येक दुर दराजका झुम्लावाङ्गहरुमा केहि पदमाहरु जन्मिने मात्रै हो त्यहाँका जीवनले कुनै सकस ब्योहोर्नु पर्दैन क्यार ।
काम भन्दा पनि दामको पछि लाग्ने कथाकथित सामाजिक संस्था र व्यक्तिहरुको लागि यो कदम र प्रयास कति चुनौतीपूर्ण होला ? बिभिन्न क्षेत्र र बर्गको हक, हित र अधिकारको लागि अनुदान संकलन गर्दै सभा सम्मेलनमा अविर र फुलमाला पहिरिने समाजका बुज्रुक समुहको लागि यो भन्दा गतिलो झापड के हुन सक्छ ?
यसपाली यहि जिज्ञाशा तपाई मेरा प्रिय पाठकहरुलाई छोड्दै यसपाली पनि यत्ति ।
जाँदा जाँदै पदमा लिंखा मगरको पछिल्लो गजल यहाँहरुको लागि
समुन्द्रको होइन आज तारे भीरको कुरा गरौं
चाँप गुरास सजाउने तिनै शीरको कुरा गरौं
विशाल छाती बनाएर स्वाभिमानले बाँचेका छौं
हाम्रो नजर उच्च पार्ने शहिद बीरको कुरा गरौं
सागरको तटमा पुगे के भयो र नेपाली हौं
उही गण्डकी कर्णाली र कोशी तीरको कुरा गरौं
बाध्यताले परदेशीयौं दुःख गरी कमाउनलाई
एकान्तमा सताउने मनको पीरको कुरा गरौं
जे भए नि कहाँ हुन्थ्यौं आमासँगै खाए जस्तो
भैसी गोठमा पाक्ने ताजा मीठो खीरको कुरा गरौं
सोमवार, २०७१ मंसिर १४ गते ०४:५६ / Monday, Dec 01, 2014 4:56 am